Qeyb ka mid ah taageerada dhaqaale oo la gelin doono soo galootiga - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Qeyb ka mid ah taageerada dhaqaale oo la gelin doono soo galootiga
La daabacay tisdag 5 mars 2013 kl 09.30
Dawladda dalka Iswiidhen ayaa qorsheenaysa dhimista taageerada dhaqaale ee dalkani u fidiyo waddammada soo koreya, middkaasian oo loo mariyo hayadda caalamiga ee qarammada Midoobey, sida lagu sheegay war saaka ka baxay Ekot laanta wararka ee idaacadda Iswiidhen.
- Waxaa lagu sugan yahay xaalad dhalisay baahi sidii dib u eegid loogu sameeyn lahaa taageerada dhaqaale ee dalkani u fidiyo waddammada soo koreya, sida uu laanta Ekort u sheegay Anders Borg, wasiirka dhaqaalaha ee dalka Iswiidhen.
Miisaaniyadda taageerada dhaqaale ayaa lagu talo jiraa sidii loo dhimi lahaa iyadoona la qorsheeyneyo sidii loogu miisaaniyad gelin lahaa soo-galootiga dalka ku sugan sannadka la fileyo iney aad kor ugu kacaan.
- Kolka ey dalka socdaal ku yimaadaan soo-galooti, waa in laga miisaaniyad geliyaa miisaaniyadda taageerada dhaqaale ee waddammada soo koreya. Waa xaalad loo baahan yahay in miisaaniyaddaasi ku dhacdo qasnad mid ah, sida ay sheegtay Gunilla Carlsson, wasiirka taageeradu.